NgoDisemba 2019-Funda ukurhweba
Inyanga: Disemba 2019
Ingxaki yabasebenzi baseBitcoin eChina ngaphezulu kombane
Ukuhlaziywa: 31 Disemba 2019
Abasebenzi mgodini baseBitcoin eSichuan, iphondo lase China, baphantsi koxinzelelo olunzima ngabasemagunyeni ukuba banciphise ukusebenza kwabo njengoko iphondo libona intsilelo kwimveliso yombane.
Kwaxelwa nge-29 ka-Disemba yi-Asia Times ukuba le ndawo ihlala ilindele ukunqongophala kombane kwixesha elomileyo (ukuqala ngo-Okthobha ukuya ku-Epreli). Imisebenzi yezemigodi ngokubanzi ifuna amandla amakhulu yiyo loo nto abasemagunyeni bejolise ekunciphiseni imisebenzi yezemigodi kumaxesha onyaka angenamvula.
Amaxesha oNyaka ahlukeneyo, amaNqanaba oNyamezelwano ahlukeneyo
Ngokwesiqhelo, ukumbiwa kweBitcoin kuthintelwa eSichuan ngexesha lonyaka elomileyo, kodwa kuvunyelwe kwixesha lemvula. Oku kungenxa yemvula enkulu efumanekayo eMpuma Asia ngexesha leemvula, ebangela ukuba izitishi zombane zivelise umbane omkhulu.
Ngamaxesha onyaka owomileyo, nangona kunjalo, abasemagunyeni bazama ukuqinisekisa ukuba abahlali kunye namashishini alapha bafumana umbane owaneleyo, kwaye ngenxa yoko banikwe igunya lokunciphisa ukusetyenziswa kweefama zeBitcoin kuloo mmandla.
Ukwanda koqwalaselo lweMigodi yeBitcoin
Iifama zezimayini zeBitcoin ayizizo zodwa ezifumana ubunzima kubasemagunyeni. Izixhobo zombane nazo zibe phantsi kwezohlwayo ezinzulu.
NgoDisemba, izityalo zamandla ezi-2 zahlawuliswa malunga ne- $ 140,000 nganye ngokudlulisela umbane kwiifama zeBitcoin ngaphandle kokufumana ilayisensi efanelekileyo yokubonelela.
I-Bitcoin miners e-China i-akhawunti malunga ne-65% yexabiso elipheleleyo le-hash emhlabeni. Nangona kunjalo, abasebenzi basezimayini kweli baphantsi kweliso elibukhali njengoko abasemagunyeni bezama ukulwa ukusetyenziswa kakubi kwamandla.
Kwinyanga ephelileyo, kwibhodi yokugcina ucwangco kwicandelo lezemigodi ye-cryptocurrency, abasemagunyeni baseTshayina eMongolia baqhuba umsebenzi owawujolise ekucoceni nasekubuyiseleni iinkampani zemigodi ye-cryptocurrency kule ndawo.
Kwakhona, ebutsheni bale nyanga, abasemagunyeni base-China bathimbe oomatshini bemigodi ye-cryptocurrency abayi-7,000 ekwakusithiwa basebenzisa umbane ngokungekho mthethweni. Ulwabiwo lwenziwe ngenxa yovavanyo oluqhelekileyo olugubungele amakhaya asekhaya angama-70,000, abathengisi abangama-3,060, kunye noluntu oluninzi kwisixeko saseTangshan.
tags Iifama zeBitcoin, Bitcoin Mining, iTshayina, Oomatshini beMigodi yeDijithali yemali
I-USDCHF iyasilela ngelixa ukuthengisa kuqhubeka phantsi kwenqanaba le-0.9695
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-nge-31 kaDisemba
Emva kweseshoni yaseAsia, ukuhamba ecaleni ecaleni kwenqanaba le-0.9695, isibini se-USDCHF saphulukana nentshukumo yaso kwiyure yokugqibela saza sachukumisa kwelona nqanaba lisezantsi ukusukela ekuqaleni kukaNovemba nge0.9662. Ngexesha lokubhalwa, esi sibini sehle nge-0.23% ngemini kwinqanaba le-0.9660.
Amanqanaba okumelana: 1.0231, 0.9833, 0.9695
Amanqanaba enkxaso: 0.9659, 0.9600, 0.9541
Kwimeko ebanzi, imeko yexesha elide ihlala i-bearish, njengoko i-USD / CHF ikuluhlu lwe-0.9659 / 1.0231. Ngayiphi na imeko, ukuphumelela kokuthatha inyathelo kwenqanaba le-0.9659 kuyafuneka ukubonisa ukubuyela kwakhona kwedrop.
Ngaphandle koko, ukurhweba ngamacala amaninzi kunokurekhodwa kunye nomngcipheko wenye into ebuyayo. Okwangoku, ukuphumelela kwenqanaba kwinkxaso ye-0.9695 kunokujolisa kwinqanaba lokuxhasa i-0.9541.
I-intraday bias kwi-USDCHF ihlala kwicala eliphantsi kweli nqanaba. Okwangoku, ukuntywila kwinqanaba le-1.0027 kunokuqhekeka ngaphantsi kwenqanaba lenkxaso le-0.9659.
Kwelinye icala, ikhefu elincinci lokumelana ngaphezulu kwenqanaba kwi-0.9739 inokutshintsha ukungathathi cala kwe-intraday bias kwaye ikhokelele ekudityanisweni kuqala, ngaphambi kokuqala okunye ukwehla.
Ixabiso lokungena: 0.9659
Igolide vs iDollar: Phakathi kweThemba loRhwebo, iGreenback ihlala phantsi njengeGold Bulls Align on New Year Eve
Idola yaseMelika ihlala ngasemva ngenxa yokuma kokuphela konyaka kunye nethemba malunga nesivumelwano sokurhweba ngeSino-US. Ngokweengxelo, u-Liu He, oyintloko-thethwano kwezomnotho e-China, uzakundwendwela eWashington ngempelaveki ukuyosayina isivumelwano. Bobabini iWashington neBeijing banethemba.
Ikhalenda laseMelika libonisa ixabiso lamaxabiso ezindlu kunye nesalathiso sokuzithemba kwabathengi kwiBhodi yeNkomfa ngoDisemba, ekulindeleke ukuba inyuke. Uninzi lwezalathi ezilungileyo zangoMvulo, ezinje ngokuncitshiswa kwentsilelo yorhwebo, khange ziluncede idola.
Umkomishinala otyunjiweyo we-EU uPhil Hogan uxelele I-Irish Times ukuba ufuna ukuphinda ulayishe ubudlelwane phakathi kwakhe ne-United States. Ngokukodwa, uqaphele ukuba iirhafu sele zenziwe kwialuminium kunye nengozi yemisebenzi ngenxa yerhafu yedijithali eYurophu.
UHogan uthethe ne-arhente yezoqoqosho yase-US uRobert Lighthizer ngaphandle kokuphazamisa ngaphambi kweKrisimesi. Utyhile ukuba bavumile ukudibana eWashington phakathi ku-Januwari ukuvavanya ukungabaluleki kangako kwemicimbi ebangela ubunzima phakathi kwe-EU ne-US.
Akukho sizathu sokungena kubuchule bokucima ukwanda kokutshintshiselana ukuba asivumelani nelayini kwisicwangciso sokutshintshiselana ngokubanzi.
Indawo yeGolide yokudibanisa ukuqhubela phambili kwayo
Emva kokufika kwelona nqanaba liphakamileyo ukusukela ngasekupheleni kukaSeptemba nge- $ 1,525.10 ngeyure yakutshanje, igolide (i-XAU / USD) ingene kwisigaba sokudibanisa njengoko iinkunzi ziphefumla kwaye zaqhubela phambili kolu phuhliso lulandelayo.
Iinkqubo ezinethemba malunga nobudlelwane phakathi kwe-US ne China zigcina inzala yedola yase-US ekhuselekileyo ngokuchasene nabakhuphiswano ababalulekileyo, nto leyo eyenza ukuba intsimbi etyheli kwiidola zase-US iqhubeke ngokuthe ngcembe kwiingcali zezemali ezikude.
Ukuphela kwexesha, umcebisi wotshintshiselwano nge-White House uPeter Navarro uqaphele ukuba ukuqonda kwinqanaba eliphambili kuya kutywinwa kwiveki enye ukusukela ngoku. Okwangoku, iimarike ziyavuma kwintetho yamva nje kaMongameli uTrump kunye noNobhala Wezemali Mnuchin malunga nesivumelwano soqoqosho.
Ngaphandle koko, ukwanda kwesicelo segolide ukuya esiphelweni sonyaka phakathi kokuxhasa ngokuchasene nomngcipheko kunyaka omnye ukusukela ngoku ukonyusa iBullions emantla. Kwicala lokuphuhlisa ukuthembela kweengcali zezezimali kwigolide, ii-theorists ziphakamise iimeko zabo zokunyusa ikhontrakthi zegolide ze-COMEX kwiveki ephelileyo ngaphambili kwe-24 kaDisemba.
Silindele ngokupheleleyo ukuphuma kwe-2019, ixabiso legolide linokunyuka kwaye libe ngababukeli bezinto ezingalindelekanga kumbono weemeko ezibuthathaka zokutshintshana. Qaphela ukuba isinyithi esimthubi sibhekise ekufumaneni malunga neepesenti ezingama-19 zeenzuzo zonyaka ngo-2019, nto leyo eyenza ukuba ibe ngunyaka omkhulu ukusukela ngo-2010.
tags Indawo yegolide, Isivumelwano soRhwebo, Idola yaseMelika
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Bitcoin (BTC )- $ 7300 yeNkxaso iyahluleka, Ngaba i-Bitcoin iya kuphela ngo-2019 kwi-Bearish?
Ewe, siya kuyazi ukuba ekupheleni kosuku. Ukusukela ukuba i-Bitcoin yehle isuka kwi- $ 7700 nge-23 kaDisemba ngo-7100, ixabiso lijongane nokunikezela okukhulu kunye nemfuno, kubanjiswa eyona ngqekembe ithengiswa kakhulu phakathi kwe- $ 7500- $ 2020 zones kwiintsuku ezimbalwa ngoku. Ukuba iBitcoin iyakwazi ukuwela le mimandla yamaxabiso ngaphambi kokuvalwa kwanamhlanje, inokushiya umkhondo kwicala elinokubakho kunyaka wama-XNUMX.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi yeYure-Yenye
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 7300, $ 7400, $ 7500
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 7200, $ 7300, $ 7000
Izolo, besikhankanyile inkxaso ye-7300 yeedola njengenqanaba lokubuyela kwiBitcoin kodwa kubonakala ngathi inkxaso ayinakubamba ngenxa yonikezelo olunzima kwimarike. Njengoko sinokubona kwitshathi yeyure, iBitcoin ngoku ithengisa kancinane ngaphantsi kwale nqanaba lenkxaso-yokuguqula-ukumelana nexabiso langoku ngexabiso lama- $ 7266.
Okwangoku, i-7200 yeedola yamkelwa kabini kwaye ngaxeshanye ijongane nokumelana ne- $ 7300. Oku kubangele umjikelo omncinci wokudityaniswa kwezi yure zimbalwa zidlulileyo. Ukuba iBitcoin inyuka umva ngaphezulu kolu xhathiso, i-7400 yeedola kunye ne-7500 yeedola inokuphinda ivele.
I-BTCUSD, itshathi yeYure-nge-31 kaDisemba
Kwelinye icala, ukwehla ngezantsi kwe- $ 7200 kungabhengeza inkxaso ye-7100 yeedola kwaye ikakhulu i-7000 yeedola kwisoyikiso se-bearish. Nangona kunjalo, izikhombisi zobuchwephesha zibuyele kwimimandla yazo emibi, iphakamisa ukuba abathengisi babuyela kwimarike.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi ye-15M-Bearish
Ukwalelwa ngoDisemba 29 malunga ne-7500 yeedola ibekwe kwi-Bitcoin kuluhlu olwehlayo kwisithuba semizuzu eli-15. Kodwa ngoku, kubonakala ngathi i-BTC inyathela kolunye ujingi lwe-bullish, nangona ukuseta kungaqinisekiswanga okwangoku. Ikhefu langoku elingaphezulu komgca wokumhlophe omhlophe licebisa ukonyuka okunokubakho kodwa i-7300 yeedola yinto ebalulekileyo yokuchasana nabathengi ukuba boyise.
Nje ukuba oku kuchasana kuphule, i-BTC inokuthi iphinde ibuyise i-7400 kunye ne-7500 yeedola.
I-BTCUSD, itshathi ye-15M-Disemba 31
Ukuba i-7300 yeedola iyala, ixabiso linokubuyela kwi-7200 yeedola kwaye inokuba yi- $ 7100, ebisebenza njengenkxaso ephambili okwethutyana ngoku. Ngaphezu koko, i-Bitcoin ibonisa iimpawu ezintle kwi-RSI kunye ne-MACD. Kuya kufuneka silindele ukunyuka ngokukhawuleza xa amaxabiso enyuka ngaphezulu kwenqanaba lokumelana kwangoko.
I-BITCOIN YOKUTHENGA UMSEBENZI
Thenga ukungena: $ 7266
I-TP: $ 7377
Jonga zonke izithuba nguMichael Fasogbon
tags BTC, Ukubikezela, Trading
I-TRON (TRX) ijika ijikeleze inqanaba langoku, ukuqhawuka okunokwenzeka
Ukuhlaziywa: 30 Disemba 2019
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 0.025, i-$ 0.030, i-$ 0.035
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 0.015, i-$ 0.010, i-$ 0.005
I-TRX / i-USD yexesha elide: Ukuthwala
I-TRON kwintengiso yebhere. Ingqekembe yawela kwimarike yebhere ukuya kwi-0.020 yeedola esezantsi kwaye yenza ukulungiswa okuphezulu ukuya kuthi ga kwi-0.030 yeedola ngoJulayi. Emva kohlengahlengiso lwamaxabiso, ingqekembe yehle yaya kuthi ga kwi-0.012 yeedola ngoSeptemba. Ngezantsi kwetshathi, ixabiso liye lahlahlela kodwa lijongene nokukhishwa kwinqanaba lexabiso le-0.020.
Okwangoku, inkxaso ye-0.012 yeedola ibibambe ukusukela ngoSeptemba. Ingqekembe iya kuphakama ukuba inkxaso yangoku ibambe, nangona kunjalo, i-TRON iswele imfuno kwinqanaba eliphezulu lamaxabiso. Ingqekembe iya kuwa xa ukuthengisa uxinzelelo kuqhubeka kwaye kwaphuka ngaphantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 0.012.
Ukusuka kwisixhobo seFibonacci, umzimba wekhandlela lenkunzi uvavanye inqanaba lokubuyisa le-0.618. Oku kuthetha ukuba i-TRON iya kuthengisa kwaye iwele kufutshane nenqanaba lokwandiswa kwe-1.618. Oku kulingana nenqanaba lamaxabiso e-0.007. Okwangoku, ukusuka kwintsebenzo yexabiso, imarike idibanisa ngaphezulu kwe- $ 0.012, ukulungiselela inyathelo elilandelayo.
Ixesha lamaXabiso aMandla aHlangeneyo kwinqanaba le-14 kwinqanaba 47 libonisa ukuba imarike iyatshintsha ezantsi kwetshathi. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijike ngokuthe tyaba zibonisa ukunyuka kwamaxabiso.
I-TRX / USD i-bias yexesha eliphakathi: Thwala
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-TRON ithengisa ngaphezulu kwe- $ 0.013 yenkxaso. Ngomhla ka-17 kuDisemba, le ngqekembe yathengisa yawela ezantsi kwi-0.12 yeedola, yaphinda yaqala ukunyuka inyuka. Ukunyuka okuphelileyo kwaphela nge-0.015 yeedola ngelixa ingqekembe yehla yaphantsi okhoyo ngoku. Imakethi ibonakala ngathi ine-bearish ediniweyo kwi-0.012 yeedola ngelixa iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso. Ingqekembe ikwajongana nokwaliwa kwinqanaba eliphezulu lamaxabiso ngenxa yokunqongophala kwemfuno.
Ingqekembe yayithengisa kwisitishi esihlayo. Iibhere zaphula umgca wokuxhasa njengoko ingqekembe yehla yaya kuthi ga kwi-0.012 yeedola. Emva koko, inkxaso ikhuselwe kakuhle njengoko iinkunzi zeenkomo zenza ukunyuka okuya kwiindawo eziphakamileyo zamva nje. Imarike ithengisa ngaphantsi kwe-75% ye-stochastic yemihla ngemihla ebonisa ukuba ingqekembe ikwi-bearish umfutho.
I-Outlook Jikelele ye-TRON (TRX)
I-TRON idibanisa ezantsi kwetshathi. Ukusuka kwisixhobo seFibonacci, kubonisa ukuba xa uthengisa uxinzelelo luqala kwakhona ingqekembe iya kuwela kwinqanaba eliphantsi le-1.618 okanye i-0.007. Ukusuka kwintengo yexabiso, ukuthengisa uxinzelelo kuya kuqhubeka kwakhona emva kokuba inkxaso yeedola ye-0.012 iqhekekile. Oku kuyakuqinisekisa ukuqikelelwa kwesixhobo seFibonacci sokuwa kwexabiso. Okwangoku, isibini sisexesha lokudityaniswa.
Umqondiso woRhwebo lweTron
Ixabiso lokungena: $ 0.013
Yeka: $ 0.011
Ithagethi: $ 0.020
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, TRON, TRX, UKUGQIBELA
I-Mintdice-esebenzayo ngokuPheleleyo kwi-Intanethi ye-Cryptocurrency Casino kunye neQonga leWebhu yoTyalo-mali
I-MintDice yeyona yekhasino ye-bitcoin ibalaseleyo emhlabeni yokudlala i-Bitcoin Dice, i-slots, i-Plinko kunye neminye imidlalo efana neBit.rocket, owona mdlalo uphambili we-bitcoin emhlabeni ngethamsanqa kunye nobuchule. Ikwanazo iindidi ezahlukeneyo ezinxulumene nokusetyenziswa ngokulula kwiithebhu ezahlukeneyo ezinjengeebhanki, i-bitcoin, i-blockchain, i-Ethereum, iinkonzo zezezimali, ukungcakaza, ukugembula, imidlalo, i-intanethi, isoftware. Ekwikomkhulu le-European Union, yaqala ukusebenza nge-Matshi 2017.
IMintdice ligama le-intanethi, nangona igama elisemthethweni yiPrism Sentinel NV, eqeshe abasebenzi abali-11-50 kwinkonzo yayo.
Olunye uphawu olothusayo lweMintdice kukuba ikwabonelela ngesisombululo kubatyali mali kwiBitcoin, ebavumela ukuba batyale imali ngokuthe ngqo kwi-bankroll yekhasino ukuze bafumane kwangoko imali engenayo kwi-cryptocurrency yabo.
Iqonga likwaveza iwindow yotyalo-mali ngamathuba amaninzi okuphumelela kunye nokuxhamla ngaphandle komngcipheko.
Esinye seziphumo ezinokubakho kukubeka iiasethi kwiMasternode okanye eStaking, ngelixa abathengi banokuthi babeke iiasethi kumachibi eMasternode ekwabelwana ngawo ngexabiso eliphantsi kwaye bafumane inzuzo kwiBitcoin ukungcakaza kuzuza (kuxhomekeke kumthamo wedipozithi).
Esinye isindululo seMintDice sithi "Yiba yiBhanki". Kule nxalenye, abathengi bafumana icandelo leenzuzo echibini, elibandakanya iipesenti ezili-15 zento nganye ebekwe eqongeni, ngokuxhomekeke kubungakanani babathengi. IMintDice iqinisekile ukuba bonke oovimba abagciniweyo abakho semngciphekweni, kwaye iya kuhlala inikezela ngokuthe tye kubathengi bayo njengeziko elivela kwinethiwekhi ekhuselekileyo, yentlalontle nevulekileyo.
IMintdice ilawula i-ecosystem ekhuselekileyo
IMintDice isebenzise ngokufanelekileyo iindlela ezili-14 kwiqonga layo elikwi-Intanethi. Ezi ziquka iMetaport Vieweta, i-iPhone / i-Mobile eguquguqukayo, kunye ne-SSL njengoko kuqhele ukwenziwa. Ngokubhekisele kumanqanaba okhuseleko kunye nokuthembela, kuxhomekeke kubalo lokungathembeki olwenziwe kubhlokhi ubuchule, lisebenza kwelona nqanaba lakutshanje lokhuseleko kunye nokuthembela.
Ukubheja okusekwe kwiWebhu kuyindlela engathandabuzekiyo yokuphuhlisa kuyo yonke indawo kwihlabathi. Kwindawo yemigangatho yemali ekhompyutheni, ubukho beekhasino zemali yedijithali ziyaphuhliswa: oku kulungile njengakuqala kwindlela yokubheja, apho ezona zinto ziphambili ezonyusa ukwamkelwa kukutshintshiselana ngaphandle kwempikiswano, njengobuchwephesha obulungileyo.
I-MintDice isecaleni lokusika kwesi sibonelelo siphambili. Iqonga layo lokungcakaza kwi-Intanethi libonelela ngeendlela ezimbalwa zemali. Oku kubandakanya i-bitcoins, i-Litecoins, i-Ethereum, i-Ripple, i-Dogecoin, i-Blocknet, i-NEO, i-Decred, i-ZCoin kunye nabanye. Eyona njongo iphambili yeMintDice kukomeleza ukubheja kunye nenkonzo yolonwabo, kubandakanya wonke umntu okwindawo yakhe yokudlala kwi-intanethi.
I-Bitcoin kunye neendlela ezahlukeneyo zokufihla imali ezihlanganisiweyo kunye nomdlalo wehlabathi, zibonisa inkqubela phambili ngendlela abadlala ngayo abantu kwiwebhu. Okwangoku ukubheja okusekwe kwiwebhu kuya kusaziwa ngokuqhubekekayo, okunika ukufikelela ngakumbi kushishino ngengeniso yezigidi zeedola. Umxube wamacandelo amabini amakhulu eshishini elitsha (imidlalo kunye nemali yedijithali) inika umdla omkhulu kubaxumi abasuka kwihlabathi liphela.
Okwangoku, yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokungcakaza kwi-Intanethi, I-MintDice, yenza kube lula kubasebenzisi ukuba bafumane imali ngokuthengisa izinto ezahlukeneyo zokudlala usebenzisa i-cryptocurrensets.
tags Bitcoin, Ukungcakaza kweDijithali yemali, Utyalomali lweDijithali yemali, Mintdice
I-China isandula ukufumana i-ETF yayo yokuqala
Iindaba eziphuma e-China zibonisa ukuba bekukho nje ukufayilwa kophuhliso lwe-blockchain-based exchange-traded-fund. Oku kuvezwe yiKhomishini yoLawulo lweZokhuseleko yaseTshayina.
Ukufakwa kwe-ETF kuboniswe yinkampani yolawulo lweeasethi, iPenghua Fund ngomhla wama-24 kuDisemba. I-ETF ijolise ekulandeleleni ukusebenza koluhlu lwezitokhwe ezisekwe kwi-blockchain
I-Shanghai Securities Journal inika ingxelo yokuba ukuba kugunyazisiwe, iya kuba yi-ETF yase-China eyi-blockchain-based ETF.
Ukuqaliswa kwesalathiso seAuspicious-Timed Index
Ngokudibeneyo, ukufayilwa kukaPenghua kwenziwa isicelo kwangolo suku lunye i-Shenzhen Stock Exchange yabhengeza elubala "iBlockchain 50 Index" yayo.
Njengoko igama layo libonisa, isalathiso senziwe ziinkampani ezinxulumene ne-blockchain ezingama-50 zaseShenzhen, ngokusekwe kwimali yentengiso. Kwakhona, njengoko kuxeliwe yi-SSJ, iinkampani ezikwisalathiso ziindidi ezahlukeneyo zamashishini.
Oku kungathetha ntoni oku kuFayila
Abahlalutyi bakholelwa ukuba ukuba ukugcwaliswa kwe-ETF kwe-Penghua kugunyazisiwe, kuya kuvula amasango kwamanye amaziko ukuba afake izicelo ze-ETFs ngokunjalo.
I-SSJ ithi nangona ibhlokhi ye-blockchain intsha, ukukhula kumandla kwesikhokelo somgaqo-nkqubo kunye nokunyuka kwenani leenkampani eziphuhlileyo kolu shishino kunokubangela ukwamkelwa kwe-ETFs esekwe kwi-blockchain.
Kudliwanondlebe lwakutsha nje, umphathi weNgxowa-mali ongasasebenziyo waseBeijing ucacisile ukuba uninzi lwabatyali mali abanalo uqhelwaniso olululo malunga notyalo mali kwicandelo le-blockchain kwaye ii-ETFs zibonakalisa uluhlu lweeaseti kwaye zinokusebenza njengotyalo mali olusebenzayo.
Kolunye udliwanondlebe olwenziwe yi-SSJ, uMphathi weNgxowa-mali uDong Weiwei uthe ibhlokhi, njenge-DLT, yayinamandla amakhulu kumashishini aliqela. Udwelise amashishini aliqela anokuthi ibhloko ye-blockchain ibe nefuthe elimangalisayo kubandakanya imali yedijithali, i-Intanethi yeZinto, ulawulo lwekhonkco lokuhambisa, kunye namanye amacandelo amaninzi.
Nangona i-China ibonakala ngathi iza phambili kukhuphiswano lwe-blockchain lwehlabathi, kuye kwakho izikhalazo malunga nokuba uninzi lwezinto ezintsha eziveliswayo zikhutshwa ngurhulumente kwaye ayizizo ezabucala.
tags Itekhnoloji yeBlockchain, iTshayina, IKomishini yoLawulo lweZokhuseleko yaseTshayina (CSRC), Iimali eziThengiswayo eziThengisiweyo (ETF)
Iirali ze-EURUSD zigcina ixesha elingasentla kufutshane nenqanaba lamaxabiso kwi-1.1200
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-nge-30 kaDisemba
Isibini se-EURUSD sitshintshele kwelona nqanaba liphezulu ukusukela phakathi ku-Agasti kwinqanaba lexabiso le-1.1211 kwaye sangena kwinqanaba lokudityaniswa. Ngexesha lokubhalwa, isibini sasisondele kwinqanaba lexabiso le-1.1200, longeza i-0.2% ngosuku.
Amanqanaba okumelana: 1.1515, 1.1450, 1.1280
Amanqanaba enkxaso: 1.1178, 1.0981, 1.0879
Kwindlela enkulu, isaphulelo esivela kwinqanaba elikwi-1.0879 sithathwa njengentshukumo yokulungisa kweli nqanaba. Ngelixa silindele ukuqhubela phambili, ukukhula okunokubakho kungabakho ngokubuyiselwa kwinqanaba le-1.1450 ukuya kwi-1.0879 ukuya kwi-1.1515.
Ngelixa ukwehla kwinqanaba ukusuka kwi-1.1450 (ephezulu) kunokuqhubeka kamva. Nangona kunjalo, ukuqina okuzinzileyo kwenqanaba le-1.1515 kungayenza buthathaka le nkangeleko ye-bearish kwaye kukhokelele ekukhuleni okunamandla okudlulileyo kwinqanaba elingasentla kwi-1.1515.
I-EURUSD yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Bullish
I-EURUSD ukuza kuthi ga ngoku iqhubela phambili ukuya kwi-1.1210 ngexesha lokuthengisa kwanamhlanje. Ukophulwa kokuchasana kwinqanaba le-1.200 kubonisa ukuqhubeka kokuphindaphinda okupheleleyo kwinqanaba le-1.0879.
I-intraday bias okwangoku inyuka nge-100% uqikelelo ukusuka kwinqanaba kwi-1.0879 ukuya kwi-1.1178 ukusuka kwi-1.0981 ukuya kwi-1.1280 kulandelelwano olulandelayo. Ngayiphi na imeko, uqikelelo lwexesha elifutshane liza kuhlala lilumkile okoko nje inkxaso yenqanaba kwi-1.1066 iqhubeka, nangona kunjalo ukubuyela umva kwenzeka.
Ixabiso lokungena: 1.1178
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC) -Imowudi yokubuyisela: I-Bitcoin ifumana i-7300 yeedola ukuya kwi-Refuel Swing High
Kwiveki ephelileyo, amaxabiso eBitcoin abuye abuyele kwi-7500 yeedola kwi-Bitfinex emva kokufumana inkxaso kwi-7100, ebambe iveki ephelileyo. Nangona intshukumo ye-bullish ijongeka iyinyani; I-Bitcoin kufuneka iphule imimandla engakumbi yokumelana ngaphambi kokuba siqinisekise ukubuyela umva okungaphezulu kwe- $ 8000. Okwangoku, i-7900 yeedola kukuchasana okubalulekileyo ukuseta i-BTC kwimowudi yokuqhubela phambili.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi ye-4H-Bullish
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 7500, $ 7700, $ 7900
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 7100, $ 6800, $ 6500
I-Bitcoin ibanjwe kwindlela esecaleni kwiiveki ezidlulileyo. Ukuwa phakathi kuDisemba ukuya kwi-6500 yeedola yayikukubuyela kwakhona ngasekupheleni kukaNovemba, nangona i-BTC ibuyile yabuyela ngaphezulu kwe-7000 yeedola kwaye ngoku ithengisa malunga ne-7355 yeedola okwangoku. Ngoku, iBitcoin ibuyela umva kufutshane nendawo yekhefu yangoku ye- $ 7300. Ukuba lo mmandla uyasilela ukubamba, i-BTC inokubuyela kwi-7100 yeedola yenkxaso, apho indawo emhlophe emhlophe ethe tye ilele.
Idrive engezantsi kommandla osezantsi inokuvumela ukubuyela kwakhona kwi- $ 6800 kunye ne- $ 6500 yenkxaso, ephawulwe ebomvu kwitshathi. Kwicala elingasentla, kukho ukungavisisani okusondeleyo kwi- $ 7500 kunye ne- $ 7700, apho indawo emhlophe ethe tyaba-emhlophe ilele. Ukuxhathisa okukhulu kulele kwi- $ 7900, ephawulwe eluhlaza kwitshathi yeeyure ezi-4. Nangona kunjalo, iBitcoin kulindeleke ukuba iqhubeke nokukhula okoko i-RSI kunye neMACD zihlala zilungile.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi yeYure-Bullish
I-Bitcoin ilandela uvakalelo oluphezulu kwitshathi yeyure kodwa ixabiso liyabuthathaka ngaphezulu kweeyure ezingama-24 zokugqibela. Imakethi ngoku ihleli kumgca wenkxaso omhlophe okhulayo, obumba ukusukela nge-25 kaDisemba. Iibhere zinokuthatha ngokupheleleyo ukuba inqanaba lamaxabiso akhankanyiweyo liyaphuka.
I-BTCUSD, itshathi yeYure-nge-30 kaDisemba
Iidola ezingama-7200 kunye ne-7100 ezixhasayo zingabonakaliswa ekuthengiseni uxinzelelo kwakhona. Nangona kunjalo, iinkunzi ze-BTC zinokubuya zibuyele emarikeni kungekudala. Ukufumana kwakhona i- $ 7400 kunye ne- $ 7500 yokumelana kunokubangela ukuba kuthengwe ngakumbi kwi- $ 7600- $ 7700 ndawo. Kodwa ukujonga izikhombisi zobuchwephesha, iBitcoin isakhangela inqanaba lokubuya. Singalindela ukuba i-rally iqhubeke ngokukhawuleza xa kuphela ukubuyela umva.
Thenga ukungena: $ 7304
I-TP: $ 7500
tags Ukubikezela, Uhlalutyo lweShishini
ICardano (ADA) idityaniswa emazantsi, abathengisi basaqhubeka
Ukuhlaziywa: 29 Disemba 2019
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 0.06, $ 0.07, $ 0.08
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 0.05, i-$ 0.04, i-$ 0.03
ICardano iqhubekile nokudityaniswa kwayo ukusukela ngoSeptemba. Ukuhamba kwexabiso lengqekembe bekungabalulekanga. Okwangoku, i-ADA ithengisa nge-0.033 yeedola ngaphezulu kwenqanaba lenkxaso ye-0.030. Ixabiso liye lahla ukusuka kwi- $ 0.050 ngo-Septemba ukuya kwi- $ 0.033 ngoDisemba. Kukho amathuba okuba ixabiso liza kuwa okanye liphule inqanaba lenkxaso le- $ 0.030.
Ikhefu elingezantsi kwenkxaso yakutshanje liya kubonisa kakubi uCardano. Nangona kunjalo, ukuba amaxabiso abuyela kwinkxaso yangoku, ixabiso liya kufikelela kwinqanaba lexabiso le- $ 0.050. Okwangoku, iCardano ibonakaliswe ngezikhanyiso zomzimba ezincinci ezinje ngeDoji kunye ne-Spinning tops echaza ukungazithembi phakathi kweenkunzi kunye nabathengi.
Nangona iCardano ibihleli kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo, isixhobo seFibonacci sibuyisiwe kwinqanaba le-1.272 yolwandiso. Kungenxa yokuba umzimba wekhandlela lenkunzi uvavanye ukubuyela kwakhona ku-0.786. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zihamba ngokuthe tye zibonisa ukuhamba ecaleni.
I-ADA / USD i-bias yexesha eliphakathi: Ukutshintsha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ingqekembe yawela kwi-0.033 yeedola ephantsi yaza yenyuka yenyuka. Ukunyuka okuphelileyo kuyekisiwe kwi- $ 0.042 yokuchasana. Iibhere ziqala kwakhona ukuthengisa njengoko ingqekembe yehle kwakhona ukuya kuthi ga kwinkxaso yeedola ye-0.0.032. Iinkunzi 'zabuya zaya kwi- $ 0.033 zaphinda zaqala ukudityaniswa ezantsi kwetshathi. I-ADA yenza intshukumo ephezulu, ikhefu elingaphezulu kwe- $ 0.036 iya kutyhala ingqekembe iye kwinqanaba lexabiso le- $ 0.042.
ICardano ithengisa ngaphezulu kwe-75% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa ukuba ingqekembe ikwisantya esiphezulu. Ii-EMA zikwacaba ngokuthe tyaba ezibonisa ukuba ingqekembe iyadibanisa. ICardano iyakuphinda ibone i-0.030 ephantsi ukuba umgca wenkxaso uphukile. I-ADA inethuba lokuphakama ukuba i-low ekhoyo ibambe.
Umbono ngokubanzi weCardano (ADA)
ICardano isadibanisa ezantsi kwetshathi. Isixhobo seFibonacci sibonisa ukuba ingqekembe iya kubuyela umva kwinqanaba lokwandiswa kwe-1.272. Oku kulingana nenqanaba lamaxabiso le- $ 0.030. Ingqekembe inakho okanye ingafikeleli kwi-0.030 ephantsi ngaphambi kokuguqulwa. I-ADA yayidibanise ixesha elide. Kubonakala ngathi ixesha lokuphuka okanye ukophuka kusondele.
Ixabiso lokungena: $ 0.033
Yeka: $ 0.030
Ithagethi: $ 0.060
tags ADA, I-AdA / i-USD, Cardano, Uhlalutyo lwamaxabiso
← Entsha izithuba1 2 ... 15 abaDala izithuba →